THAZINRANANT: အမျိုးသမီးများအတွက် သတိပြုဆင်ခြင် စရာ
သဇင်ရနံ့ ကကြိုဆိုပါတယ်။သဇင်ရနံ့ကိုလာရောက်လည်ပတ်ကြတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးပန်းတော်ဝင်ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဣနြေ္ဓ သိက္ခါ၊ထည်ဝါတဲ့ဂုဏ်သတင်း၊မွှေးပျံ့တဲ့ရနံ့နင့်အတူ တင့် တယ်ဝေဖြာ ကျက်သရေမင်္ဂလာတွေ တိုးနိုင်ကြပါစေ။
အမျိုးသမီးများအတွက် သတိပြုဆင်ခြင် စရာ
ပြီးခဲ့တဲ့လက ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ယောက် ကိုယ်ဝန်သွားဖျက်တာ ကလေးက မကျလို့ တဲ့ ထိုင်းလက်သည်အိမ်ကနေပြန်လာပြီး မဲဆောက်က မြန်မာလက်သည်နဲ့သွားပြန်ဖျက်ဖို့ကားစီးတာ အဲ့ဒီကားပေါ်မှာပဲ ဆုံးသွားတယ်။ သူထိုင်နေတဲ့ထိုင်ခုံက ဒရိုင်ဘာနောက်က ခုံလေးမှာ။ ကားပေါ်စတက်တော့ မျက်နှာသွေးမရှိသလိုဖြူဖျော့နေလို့ဒရိုင်ဘာကညီမနေမကောင်းဘူးလားလို့ မးတယ်တဲ့ အမျိုးသမီးက ဟုတ်တယ် ကိုယ်ဝန်သွားဖျက်တာ မကျလို့မဲဆောက်ကမြန်မာလက်သည် မှာသွားပြန်ဖျက်မယ်လို့ ပြောပြီးစောင်ကို ခေါင်းမြီးခြုံအိပ်လိုက်တာ ကားရပ်သွားတာတောင် လုံးဝ
ပြန်မနိုးလာတော့ဘူးတဲ့။ ကားပေါ်မှာ လူသေတယ်လို့ သတင်းကြားရောတစ်ကား လုံးလန့်ဖြန့်ပြီး ထွက်ပြေးကြတာပေါ့။
အဲ့ဒါ ရဲတွေရောက်လာလို့အလောင်းကိုသယ်တာအလောင်းကို လုံးဝသယ်ထုတ်လို့မရဘူး၊အလောင်း
က တအားလေးတာတဲ့။ ယောကျာ်းအားနဲ့ လေးငါးယောက်လောက်ဝိုင်းပြီးမတာတောင်လုံးဝမလို့မရ
ဘူးတဲ့ ၊အဲ့ဒါနဲ့ ရဲတွေက ထိုင်းဘုန်းကြီး ၂ပါးပင့်လာပြီးဘုန်းကြီးတွေက ပရိတ်ရွတ်၊ပရိတ်ရေဖြန်းတော့မှ
အလောင်းသယ်လို့ရသွားတာ။ အဲ့ဒီသတင်းကြည့်ပြီးအလောင်းသယ်ထုတ်သွားတာကိုမြင်တော့ ကြက် သီးတွေတောင် ထသွားတယ်။တော်တော်လဲ သံဝေဂရတယ်။
တစ် နေ့ က အသိအစ်မတစ်ယောက် အိမ်သွားလည်ရင်း နဲ့ အစ်မပြောပြတဲ့သတင်းလေးပါ။ချမ်းချမ်း
တိုမြိ်ု့ က ကောင်လေးတစ်ယောက် အလုပ်လုပ်ရင်း စက်ရုံကိုအသစ်ပြောင်းလာတဲ့ ကောင်မလေး နဲ့ ရီးစားသက်တမ်း ၇ရက်အတွင်းမှာယူလိုက်ပါတယ်။ မင်္ဂလာလဲမြန်မာလိုသေချာဆောင်လိုက်ပါတယ်။ မင်္ဂလာဆောင်ပြီး ၈ ရက်မြောက်နေ့ မှာကွဲသွားပါတယ်။ အကြောင်းရင်းက ကောင်မလေးအလုပ်လုပ်
နေရင်း မူးလဲလို့ စက်ရုံထဲကဆေးပေးခန်းမှာသွားစစ်တော့ ကိုယ်ဝန်သုံးလ၇ှိနေလို့ တဲ့။ ကောင်မလေး နဲ့ ကောင်လေး ရီးစားသက်တမ်းက ၇ ရက် လက်ထပ်ပြီးတာက ၈ ရက် စုစုပေါင်းတွေ့ ရတဲ့ရက်က တစ်လတောင်မပြည့်သေးဘူး၁၅ရက်ပဲရှိသေးတယ်။အခုဗိုက်ထဲက ကလေးက ၃ လတောင်ဆိုတော့ ဒီကိုယ်ဝန်ဟာ သူနဲ့ ရတာမဟုတ်လို့ ကောင်လေးကလှည်းကျိုးထမ်းတဲ့ နွားတော့အဖြစ်မခံဘူးဆိုပြီး
ကောင်မလေးနဲ့ ချက်ချင်းကွာလိုက်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီအချိန်မှာ ကိုယ့်ဇနီးဖြစ်နေပြီမို့မကွဲ သင့်ဘူး ပြီးတော့ ကောင်မလေးကကိုယ်ဝန်နဲ့အားကိုစရာလဲမရှိတော့ညီမချင်းစာနာပြီး ပြန်ပေါင်းဖို့ပတ်ဝန်းကျင်က ဖြောင်းဖျပါတယ်။ ကောင်လေးကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ သူနဲ့ မရခင်မုဆိုးမတစ်ခု
လပ် ကလေး၃ယောက်အမေ ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် လက်ခံလို့ ရသေးတယ် ။
အခုကဘယ်သူဘယ်ဝါနဲ့ရမှန်းမသိတဲ့ဗိုက်ကိုအပျိုလို့လိမ်ပြီး သူ့ ကိုတမင်နဖားကြိုးထိုးခိုင်းတာတော့ လုံးဝခွင့်မလွှတ်ဘူး။အရင်က ချစ်သူ၇ှိခဲ့ဖူးလား၊ အိမ်ထောင်၇ှိခဲ့ဖူးလားလို့ မေးတုန်းက မရှိဘူးလို့ လိမ်
ပြောခဲ့တာကို ခွင့်မလွှတ်တာတဲ့။ ကောင်မလေးက နာ၇ီစက်ရုံကို ပြောင်းလာတာလဲ တစ်လတောင် မပြည့်သေးဘူး။ကလေးအဖေအစစ်ကဘယ်ကလဲ။ဘယ်သူနဲ့ ၇ခဲ့လဲ လို့ မေးတော့လဲ လုံးဝမဖြေဘူး။
ကောင်မလေးက အဲ့ဒီကိုယ်ဝန်ကို မွေးမယ်ဆိုရင်ဆွေမျိုးမိဘမောင်နှမ မရှိ ပိုက်ဆံမရှိဘဲ မွေးလို့ဘယ် လိုမှမဖြစ်ဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံပြန်ရင်လဲ ကလေးအဖေက ဘယ်သူပါလို့ မိဘကိုပြောပြဖို့ ကလေး အဖေမ
ရှိဘူး။ မလိုချင်လို့သွားဖျက်ချဖို့ချမ်းချမ်းအသိအစ်မကိုပြောတော့အစ်မကလဲ သူ့ မှာငါးလသားကလေး
နဲ့ကလေးချင်းကိုယ်ချင်းစာပြီး လိုက်မပို့ ရက်ဘူး တဲ့။ကောင်မလေးကလဲ ဒီကလေးကိုမဖျက်ရရင်ကိုယ့် ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေချင်တယ်လို့ လဲခဏခဏပြောနေတယ်တဲ့။ပတ်ဝန်းကျင်ကလဲ ကိုယ့်အပူနဲ့ကိုယ်
ဆိုတော့ သူ့ ပြဿနာကို သနားရုံကလွဲပြီးဘာမှကူညီနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ကောင် မလေးက ၂၄ နှစ်ပဲ ရှိ
အမှားတစ်ခုအတွက် ကိုယ်နောက်ထပ် တွေ့ ကြုံရမယ့် သောကတွေ ဒုက္ခတွေက အများကြီး၇ှိသေး တယ်နော်။ လောကမှာ လူတွေ တွေ့ ကြုံနေရတဲ့ ဒုက္ခတော်တော်များများက သူ့ ဘာသာသူရောက်
လာတာ နည်းတယ်။ကိုယ့်ဘာသာ အတွေးမှား၊ အလုပ်မှား၊ခံယူချက်တွေ လွဲမှားလို့ ဒုက္ခရောက် တာ များပါတယ်။
မိန်းမသားဘ၀ဟာ အစစအရာရာ နိမ့်ကျပါတယ်။ ဒါမေယ့် မိခင်ဘ၀ရောက်သွားရင်တော့ သားသမီး တို့ ရဲ့ ကြည်ညိုရာ၊အားထားရာ၊ မြတ်နိုးကိုးကွယ်စရာ ဂုဏ်နဲ့ ပြည့်စုံသွားပြီမို့ဘုရားနဲ့ တစ်ဂိုဏ်းထဲ
ထားပြီး ပူဇော်ကြည်ညိုခံနိုင်ပြီမို့(အမေ)ဆိုတဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ဂုဏ်နဲ့ ပြည့်စုံသွားပါပြီ။ပုခက်လွှဲတဲ့ မိခင်ရဲ့ လက်ဟာ ကမ္ဘာကြီးတောင်လွှမ်းမိုးနိုင်တယ်တဲ့ ။ မိန်းမသားတွေရဲ့ နှလုံးသားဟာသနားကြင်နာတတ် တဲ့စိတ်ရှိတဲ့နှလုံးသားတဲ့။အခုခေတ်မှာလေ အဲ့ဒီ ပုခက်လွှဲတဲ့လက်က လူတွေသတ်နေကြတာ၊ကြင် နာတတ်တဲ့နှလုံးသားကပဲကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ရက်စက်နေကြတာတွေ့ နေရပါတယ်။
“မည်သည့် ကုသိုလ် နဲ့ အကုသိုလ် ပြုလုပ်သည်ဖြစ်စေ ဇောစေတနာ (၇) ချက် စော၏ ။
ပထမဇောက ယခုဘ၀တွင်ပင် ကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးပေး၏။ “ဒိဋ္ဌိဓမ္မဝေဒနိယကံ” ဟုခေါ်သည်၊အကျိုးပေးချိန်မှာ မပေးရလျှင် ပျက်သွားသည်လည်း၇ှိ၏။ထိုသို့ အကျိုးပေးခွင့်မရဘဲ ပျက် သွားသောကံ ကို “အဟောသိကံ”ဟု ခေါ်သည်။
နောက်ဆုံးသတ္တမဇော က ဒုတိယ ဘ၀မှာ အကျိုးပေး၏။
အလယ်ဇော ငါးချက်က တတိယဘ၀မှာ အကျိုးပေးသည်။”
အခုကိုယ်ဝန်ဖျက်ချလိုက်တဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးဟာ သူပြုတဲ့အကုသိုလ်ကံ ပထမဇောက ဒီဘ၀မှာပဲ ချက်ခြင်းအကျိုးပေးခွင့်ရသွားလို့ပြီးတော့သူ့ မှာ အရင်ဘ၀က ပြုခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံ ကြီးကြီး မားမားမရှိခဲ့လို့ ဒီဘ၀မှာ ပြုခဲ့တဲ့ အကုသိုလ် ချက်ခြင်းအကျိုးပေးတာခံရတာပဲ။
မြတ်စွာဘုရား၇ှင်လက်ထက် တာဝတိံသာ နတ်ပြည်မှာ သုဗြဟ္မာ နတ်သားနဲ့ နတ်သမီး တစ်ထောင် တို့ ပန်းဥယျာဉ်မှာ ပန်းခူးနေတုန်း နတ်သမီးငါးရာဟာ ချက်ချင်းပဲစုတိစိတ်ကျ သေလွန်ပြီးအ၀ီစိငရဲ
ကိုကျသွားပါသည်။နတ်စည်းစိမ်ခံစား ရတာတောင်ဘာလို့ င၇ဲကျရတာလဲဆိုတော့အဆိုပါနတ်သမီး ငါးရာတို့ ဟာ လူ့ ဘ၀တုန်းက အ၀ီစိင၇ဲကျမည့် အကုသိုလ်ကို ပြုခဲ့ကြပါတယ်။လူ့ ဘ၀က ပြုခဲ့သော အ၀ီစိငရဲ ကျမည့် အကုသိုလ်ဟာ ပထမဇောအနေဖြင့်လည်း ပထမလူဖြစ်တဲ့ဘ၀မှာ အကျိုးပေးခွင့် မရ၊လူ့ ဘ၀မှ သေလွန်သောအခါ သူတို့ ပြုခဲ့သော တခြားကောင်းမှု ကုသိုလ်ကံများက အရင်ဝင်ပြီး နတ်ပြည်ပို့ လိုက်သောကြောင့် သတ္တမဇောအနေဖြင့်ဒုတိယဘ၀မှာလည်းအကျိုးပေးခွင့်မရ၊နတ်သမီး
ဘ၀မှ စုတေသောအခါမှ အလယ်ဇောစေတနာငါးချက်က အခွင့်ရပြီဖြစ်လို့အ၀ီဇိငရဲချက်ခြင်း သို့ ပို့ 
ဒါ့ကြောင့်ဘယ်လိုအကုသိုလ်ပဲလုပ်လုပ်ဒီဘ၀မှာ အကျိုးပေးခွင့်မရရင်တောင်နောက်ဘ၀ဘ၀တွေမှာ သွားပြီးအကုသိုလ်အကျိုးကိုပြန်ခံစားရပါတယ်။
ကိုယ်ပြုတဲ့ ကံပဲ့တင်သံကိုယ့်ထံပြန်လာမည်တဲ့၊ကောင်းတာပဲလုပ်လုပ် မကောင်းတာပဲလုပ်လုပ်တစ်
ချိန်ချိန် ကိုယ့်ဆီပြန်ရောက်မှာပဲမို့သန္ဓေဖျက်ချခြင်းရဲ့လက်တွေ့ မြင်တွေ့ ခဲ့ရတဲ့ မကောင်းကျိုးကို တင်ပြပေးပါ့မယ်၊ဝေဖန်တင်ပြချက်ကိုသေချာဖတ်ပြီး မိမိနှစ်သက်ရာလမ်းကိုလျှောက်လိုက်ပါ၊မိမိနှစ် သက်တဲ့ ဘ၀ကို ရွေးလိုက်ပါ။တစ်နေ့ ဝဋ်ပြန်လည်လို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တော့မှနောင်တတရားတွေ နဲ့ ပူလောင်ခဲ့ရင်လည်း ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် ကြိုးစားပါ၊လုပ်ရဲရင်ခံရရမယ်ဆိုတဲ့သတ္တိလေးလဲ မွေးထား ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
ဒီဘ၀မှာ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချပေမယ့်တစ်ချို့မသေပဲကျန်းမာရေးကောင်းပြီး စီးပွားတက်နေတဲ့ သူတွေ၇ှိ ပါတယ်။လောလောဆယ်တော့ အကုသိုလ်ကံကျိုးပေးခွင့်မ၇သေးလိုအတိတ်ဘ၀ ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်
လာရင်တော့ ရှောင်လို့ ပြေးလို့ လွတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။
အခုပြောပြမှာ က ထိုင်းအမျိုးသမီးတွေပါ။ ထိုင်းလူမျိုးတွေကလဲ ကံ ကံရဲ့ အကျိုးကိုယုံပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချရင် ငရဲကျမယ် အကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ လဲသိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တော်တော်များများက ကိုယ်ဝန်ဖျက်တာကိုထမင်းစားရေသောက်သလိုပဲ သဘောထားကြ
တယ်။အကြောင်းပြချက်က ကလေးတစ်ယောက်ကိုကျွေးမွေးပြုစုဖို့ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးလို့ ဖျက်ချ
တာတဲ့။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ လက်မထပ်ပဲအတူတူနေကြတာများတော့ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချတဲ့သူတွေ တော်
တော် များတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် အပျိုပဲဖြစ်ဖြစ် အိမ်ထောင်သည်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချရင် ပတ်ဝန်းကျင်က ကဲ့ရဲ့ တာ ရှုံ့ ချတာများပါတယ်။ သူတို့ နိုင်ငံမှာကသူသူငါငါဖြစ်နေကျဆိုတော့မဆန်း
တော့ဘူးလေ။ဒါပေမယ့် .. ဆန်းတာကအဲ့ဒီကိုယ်ဝန်ဖျက်ချလိုက်တဲ့ အမျိုးသမီးတော်တော်များများမှာ
ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေ ကြုံကြရတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုCable TV က Miracle Channel (www.facebook.com/ miraclethai ) က လွှင့်တဲ့ ကံ ကံ ရဲ့ အကျိုးအစီအစဉ်လေးမှာ ကာယကံ၇ှင်ကိုယ်
တိုင်ရင်ဖွင့်ထားတဲ့တစ်ကယ့်အဖြစ်အပျက်လေးပါ။တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ် အပျက်တွေကမတူပါဘူး။ချမ်းချမ်းကြည့်ခဲ့ရသလောက် ပြန်ပြောပြပါ့မယ်။
(၁) အသက် ၃၅နှစ်ကျော် အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသမီးတစ်ယောက် သူ့ မှာ စီးပွါးရေးလဲအဆင်ပြေ တယ်၊သူ့ ခင်ပွန်းကလဲ သူ့ကိုတအားချစ်ပြီးဂရုစိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့်သားသမီးမရဘူး။ကိုယ်ပိုင်အိမ်ယာ နဲ့စီပွါးရေးနဲ့အဆင်ပြေနေပြီဆိုတော့သားသမီးရတနာအရမ်းလိုချင်တာပေါ့။သားသမီး၇အောင်လဲအမျိုး
မျိုး သွားဆုတောင်းတော့..တစ်နေ့ သူမကိုယ်ဝန်ရှိလာပါတယ်။
အမျိုးသမီးကိုယ်တိုင်ကကျန်းမာရေးကောင်းပေမယ့် ကိုယ်ဝန် ၆လ ကျော်မှာ ..သူမ အိမ်မက်ဆိုးမက် ပါတယ်။အိမ်မက်ထဲမှာ ၆နှစ်သားအရွယ် ယောက်ျားလေး က သူ့ ကို စိမ်းစိမ်းကားကား နဲ့ ကြည့်ပြီး၊ “သားကိုသတ်ခဲ့တာလုံးဝမကျေနပ်ဘူးတဲ့၊ သားနာကျင်ခဲ့ရသလို ပြန်လည်နာကျင်စေရမယ်တဲ့” ။အဲ့ဒါ နဲ့ လန့် နိုးသွားတော့ အလိုလိုနေရင်းဗိုက်ထဲက တအားနာလာလို့ သွေးတွေတအားဆင်းပြီး ပထမ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျသွားခဲ့တယ်။နောက် လေးငါးလအကြာမှာ သူမ ကိုယ်ဝန်ထပ်ရတယ်။အဲ့ဒီကိုယ်ဝန် ကိုပထမတစ်ခါလို ပျက်ကျမှာစိုးလို့ နေ့ နေ့ ညည ဂရုစိုက်ခဲ့ပေမယ့် ကိုယ်ဝန် ၆လကျော်တော့ အိမ် မက်ပြန်မက်တယ်။ အရင်မက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကလေးလေးပဲ သူမ ခြေထောက်ကို လာဆွဲပြီးစိမ်းစိမ်းကား ကားပြန်ကြည့်တယ်၊သူမ လန့် နိုးတော့ဗိုက်ထဲက တအားနာပြီး တစ်ကယ်ပဲသွေးတွေဆင်းပြီးဒုတိယ
သားသမီးအရမ်းလိုချင်တဲ့ သူ့ ယောက်ျားက ၀မ်းနည်းစွာနဲ့ ငိုပြီးဘာပြောလဲဆိုတော့ ငါတို့ အရင်ဘ၀ က ပြုခဲ့ဖူးတဲ့ ၀ဋ်ကြွေးရှိလို့ သားသမီးမရတာ နေမှာပေါ့တဲ့။
အဲ့ဒီအချိန်မှာ အမျိုး သမီးက ဘာကိုသတိရသွားလဲဆိုတော့ သူမ အသက် ၂၀ အ၇ွယ် အပျိုတုန်းက ကလေးဖျက်ချခဲ့ဘူးတာသတိရသွားတယ်။အခုလက်ရှိပေါင်းနေတာက ဒုတိယယောက်ျားပါ။ ပထ မ
ယောကျာ်းနဲ့ ချစ်သူဘ၀မှာ သူမ ကိုယ်ဝန်ရခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက ငယ်လဲငယ်သေးတယ် လှတုန်းပတုန်းအရွယ်ဆိုတော့ကလေးမလိုချင်ဘူး၊ကလေးရှိရင်ရှုတ်တယ်ဆိုပြီး ဖျက်ချပစ်ဖို့ သူမချစ် သူကောင်လေးနဲ့ တိုင်ပင်တော့ ကောင်လေးက တားပါတယ်။ ဒီကလေးကို သူတာဝန်ယူမယ်မဖျက်ပဲ
မွေးပါ လို့ ပြောခဲ့ပေမယ့်မိဘတွေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကသိသွားမှာစိုးလို့သူမကိုယ်တိုင်တိတ်တ်ိတ်လေး ဖျက်ချပစ်ခဲ့တယ်။
ဘယ်လိုဖျက်ချပစ်လဲဆိုတော့ သူမဗိုက်ကိုလက်နဲ့ ထုရိုက်ပြီး .. . “နင်ဟာ ဂြိုဟ်ကောင်လေးနင့်ကိုမလိုချင်ဘူး၊ငါက လှတုန်း ပတုန်းငယ်တုန်းပဲငါ့ကိုဒုက္ခပေးမယ့်ဂြိုဟ်
ကောင်လေး ငါ့ကိုအ၇ှက်ခွဲမယ့် ကလေး သွားထွက်သွား ငါနဲ့လာမနေနဲ့နင်ကိုလည်းမချစ်ဘူး မွေးလဲ မမွေးချင်ဘူး လို့ ပါးစပ်ကလဲတတွတ်တွတ်ပြောပြီင်္း လက်ကလဲကိုယ့်ဗိုက်ကိုအနာခံပြီးတအားထုရိုက်
တာ၊” ကိုယ်ဝန်က လနုတုန်းမို့ နောက်နေ့ မှာ တစ်ကယ်ပဲပျက်ကျသွားခဲ့တယ်။
သူမချစ်သူကောင်လေးကို ဖုန်းဆက်ပြီးဆရာဝန်သွားပြတာတစ်ကယ်ပဲ ကိုယ်ဝန်ပျက်သွားပြီလို့ပြော
တော့ သူမတအားဝမ်းသာသွားခဲ့တယ်၊ဘာလို့ လဲဆိုတော့ မိဘတွေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကလဲ မသိတော့ ဘူးလေ၊နောက်လေးငါးလနေတော့ သူမ ချစ်သူကောင်လေးနဲ့ လက်ထပ်လိုက်ပါတယ်။
လက်ထပ်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာကောင်လေးကအချိုးပြောင်းလာပါတယ်။ အလုပ်လဲသိပ်မလုပ်ချင်တော့ ဘူး၊သောက်စားမူးရူးပြီးမိန်းမအငယ်တွေလဲယူလာတော့ သူမပထမယောက်ျားနဲ့ ကွာလိုက်ပါ တယ်။
နောက်တော့ အလုပ်လုပ်နေရင်း အခုလက်ရှိပေါင်းနေတဲ့ ဒုတိယလူနဲ့တွ့လို့လူကောင်းတစ်ယောက် မို့ သူမပြန်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာ ယောကျာ်းက မသောက်မစားမိန်းမ မပွေ ပေမယ့်အခုတော့သူမကိုယ်
တိုင်က သားသမီး မရပြန်ဘူး။ ဒါပေမယ့်တစ်နေ့ မှာ သားသမီးမရနိုင်တော့တဲ့ သူမကို စိတ်ပျက်ပြီး
ယောကျာ်းကအသစ်ထပ်၇ှာသွားရင်လဲ သူမ တားနိုင်မှာမဟုတ်ပြန်ဘူးနော်။၀ဋ်ဆိုတာ နောက်ဘ၀
မကူးပဲ လက်တွေ့ ဘ၀မှာပဲ အကျိုးပေးတတ်ပါတယ်။
(၂) နောက်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုက Channel7ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်းည၁၁နာရီ မှာပြတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ ပက် သက်တဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ပါ။အမျိုးသမီး က အသက် ၄၀ ကျော်ရှိပြီ။ သူမ မှာ အသက်၂၀ ကျော် သား တစ်
ယောက်ရှိပါတယ်။သူမခင်ပွန်းကလဲ လူကောင်းတစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေမယ့် မကောင်းတာကသူမသား
လေး နေရင်းထိုင်ရင်း သရဲဝင်စီးသလို ပါးစပ်က “ငါ့နေရာဝင်လုတယ် မကျေနပ်ဘူး”လို့ ပြောချင်ရာ
တွေပြောပြီး အရူးလို ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ ဖြစ်လာပါတယ်။ ညညဆိုလဲမအိပ်ပဲ ငုတ်တုတ်ထိုင်နေ တတ်တယ်၊အဲ့ဒါနဲ့ နားလည်တဲ့သူတွေက သရဲစီးတာတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားခိုင်းပြီး ပရိတ်ရေဖြန်း ပရိတ်၇ွတ်တော့မှပြန်ကောင်းလာတယ်။သူမသားလဲကောင်းသွားရောအမျိုးသမီးကိုယ်တိုင်ပြန်ဖောက်
လာပြန်ရောသူမသားဖြစ်သလိုပြောချင်ရာတွေပြောပြီး အရူးလိုကြောင်တောင်တောင်နဲ့ ဖြစ်လာတော့
နဲ့မယားကိုတော့ ဆက်ပြီးဒုက္ခမပေးပါနဲ့ လို့ ပြောပါတယ်။ဒါပေမယ့် လုံးဝ မသက်သာဘူး။
အဲ့ဒါနဲ့ Miracle Channel မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့အကြားအမြင်ဆရာနဲ့သူတို့ ကြုံတွေ့ နေရတဲ့ အခက်အခဲ
ကို Channel 7မှာမိသားစုသုံးယောက်လုံးလာပြီး မေးတဲ့အခါဆရာကဘာပြောလဲဆိုတော့အခုလာတာ
သုံးယောက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ လေးယောက် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါသေးတယ်။ အဲ့ဒီမိန်းကလေးက အမျိုးသမီးနဲ့ ဆရာရဲ့ ကြားကထိုင်ခုံအလွတ်မှာထိုင်နေတယ်တဲ့။အဲ့ဒီစားပွဲဝိုင်းထဲမှာ ခုနတုန်းကမိသား
စုသုံးယောက် အကြားအမြင်ဆရာ တစ်ယောက်နဲ့Channel7ကအစီအစဉ်တင်ဆက်တဲ့သူနှစ်ယောက်
စုစုပေါင်း လူခြောက်ယောက်ရှိပါတယ်။ဆရာနဲ့ အမျိုးသမီး ကြားမှာတော့ ထိုင်ခံအလွတ်တစ်လုံး ၇ှိပါ
တယ်၊အဲ့ဒီထိုင်ခုံမှာတော့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ထိုင်နေတာကို ဆရာနဲ့သားဖြစ် တဲ့သူ နှစ်ယောက် ပဲမြင်ပါတယ်။ ဆရာကခင်ဗျားတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခဲ့ဘူး လားလို့ မေးတော့လွန်ခဲ့ တဲ့အနှစ်နှစ် ဆယ် လောက်တုန်းက ဖျက်ချခဲ့ဘူးတယ်၊ဘာဖြစ်လို့ဖျက်ချပစ်တာလဲ လို့ဆရာမေးတော့ အကြောင်းပြချက်ကစီးပွါးရေးအဆင်မပြေသေးလို့ကျာင်းတက်နေတုန်းမို့မိဘတွေသိရင် ဆူခံထိမှာစိုး
လို့ နှစ်ဦးသားတိုင်ပင်ပြီး စိတ်တူကိုယ်တူ ကိုယ်ဝန်သွားဖျက်ချခဲ့ တယ်။
နောက်တော့ ကျောင်းပြီးလို့အလုပ်ရတော့မှ သားသမီးယူလို့ အခုလက်ရှိသားကိုမွေးတာ။
အဲ့ဒီကတည်းက ဖျက်ချခံခဲ့ရတဲ့ မိန်းကလေးဟာသူတို့လင်မယားနဲ့ ပဲမကျွတ်လွတ်တဲ့ဘ၀နဲ့အနှစ်နှစ် ဆယ်လုံးလုံးရှိနေခဲ့ပါတယ်။လူ့ဘ၀ကိုပြန်ရောက်ချင်လို့အဲ့ဒီလင်မယားထံမှာ ပြန်ဝင်စားချင်ပေမယ့်
ယောက်က အနောက်ကနေ တွန်းတာမျိုး ခဏခဏကြုံရတယ်၊မိန်းကလေးအရိပ်လဲ ခဏခဏမြင်ရ တယ်တဲ့။အမျိုးသမီးကိုလည်း သူ့ ကို ရက်ရက်စက်စက်ဖျက်ချခဲ့တာ စိတ်နာလို့ ဝင်ပူးတာတဲ့။ အဲ့ဒါနဲ့ ဆရာကအခု အမျိုးသမီးဘေးမှာ ရှိနေတဲ့ သူဟာ တစ်ချိန်တုန်းက ခင်ဗျားတို့ ဖျက်ချခဲ့ဖူးတဲ့ ခင်ဗျား တို့ ၇ဲ့ သမီးလေးမို့ သူ့ ကိုဘာပြောချင်လဲလို့ မေးတဲ့အခါ၊ အမျိုးသားကြီးက ငိုပြီး...
“ အဖေတို့ ပြုခဲ့မိ တဲ့အပြစ်တွေအတွက် အဖေတို့ ကိုခွှင့်လွှတ်ပါသမီးရယ်” တဲ့။ အမျိုးသမီးကြီးကလဲ ဘာပြောလဲဆိုတော့
“မိဘတွေသိမှာစိုးလို့ ဆူခံထိမှာစိုးလို့ တစ်ချိန်တုန်းက လူမသိအောင် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခဲ့ပေမယ့် အခု
တော့ မိဘတွေတောင်မကဘူး တစ်နိုင်ငံလုံးကပါ သိသွားပါပြီတဲ့ သူတို့ လို နောင်မှ တတဲ့ နောင်တ တရားတွေ မရချင်ရင်ဘယ်လိုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် အပြစ်မရှိတဲ့သန္ဓေသားကိုတော့မဖျက်ကြပါနဲ့ တော့
အဲ့ဒီအချိန်မှာ အစီအစဉ်တင်ဆက်တဲ့သူကဆရာကို မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်။မိဘတွေကိုယ်တိုင်က မှားလို့ တောင်းပန်လိုက်ပြီမို့ တမလွန်က ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခံရတဲ့သူက ခွင့်လွှတ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတော့ ခုနကအမျိုးသမီးကြီး ချက်ချင်း ပဲ ကလေးတစ်ယောက်လို ရှိုက်ကြီးတငင်နဲ့ငိုယိုနေပါတယ်၊ဆရာက အမျိုးသမီးကြီးကို သရဲဝင်ပူးနေပြီးဆိုတာသိလိုက်ပါတယ်... “မိဘတွေက တောင်းပန်နေပြီမို့ ခွင့်လွှတ်
လိုက်ပါ တစ်ကယ်လို့ခွင့်မလွှတ်ပဲ ရန်ငြိုးဖွဲ့ ပြီးမုန်းနေရင်လူ့ဘ၀လွယ်လွယ်နဲ့ ပြန်ရောက်နိုင်မှာမဟုတ်
တော့ဘူး၊မိဘပဲ ဖြစ်ဖြစ် သားသမီးပဲဖြစ်ဖြစ် အကုသိုလ်အလုပ်လုပ်ရင်တော့ လုပ်တဲ့သူပဲ ခံရမှာမို့ လူ့ 
ဘ၀မြန်မြန်ပြန်ရောက်ချင်ရင်နောက်ထပ်လာပြီး ဒုက္ခ မပေးပါနဲ့ တော့ အဟောသိကံ ပေးလိုက်ပါ ” လို့ပြောတော့မှ အမျိုးသမီးကြီိးငြိမ်ကျသွားတယ်။
ဆရာကဆက်ပြီးပြောပြပါတယ်။တို့ တွေ ဘယ်လောက်ပဲခွင့်လွှတ်ပါလို့ တောင်းပန်ပေမယ့် ခံစားခဲ့ရ
တဲ့ ကာယကံ၇ှင် က လက်မခံရင် ခွင့်မလွှတ်ရင် ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးတဲ့။ ကိုယ့်ကိုသတ်ခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ကို ခွင့်လွှတ်ပါလို့ တောင်းပန်တိုင်း လူတိုင်းခွင့်လွှတ်တတ်တဲ့စိတ် ရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ ရန်ငြိုးဖွဲ့ တတ်တဲ့သူလည်း ရှိတာပဲ၊ အခုမိန်းကလေးလဲ ခွင့်လွှတ်ပေးမယ်ဆိုရင်
တော့ ကိုယ့်ကိုဒုက္ခဆက်မပေးတော့ဘဲနဲ့ သူ့ လမ်းသူသွားလ်ိမ့်မည်။ ရန်ငြိုးဖွဲ့ ပြီး နာကျည်းနေတုန်း ပဲဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ကို တစ်သက်လုံးစီးပွါးပျက်အောင် ရောဂါ ရအောင် သေတဲ့အထိဒုက္ခပေးတတ်
တယ်။ဒါက ခံရတဲ့ ကာယကံ၇ှင်က ပေးတဲ့အပြစ်၊နောက်ထပ်ခံရမယ့်အပြစ်ကတော့ လောကဓမ္မတာ
ကံ ကံရဲ့ အကျိုးက ပေးတဲ့အပြစ်ပဲ။သေရင် သေချာပေါက် ငရဲကျပြီ။ငရဲကလွတ်ရင် နောက်ဘ၀တွေ
မှာ ကိုယ်တိုင်မိခင်ဝမ်းထဲနေရတဲ့အခါ အခုလိုမျိုးပဲ ရက်စက်တဲ့မိဘရဲ့ ဗိုက်ထဲဝင်စားပြီး ပြန်လည်အ ဖျက်ဆီးခံရတာ ဖျက်ဆီးမခံခဲ့ရင်လည်း အသက်တိုပြီး သားအိမ်ကင်ဆာဖြစ်တတ်ပါတယ်။
တစ်ချို့ အမျိုးသမီးတွေ အပျိုဘ၀ကတည်းက ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခဲ့တာ များခဲ့ရင် လက်တွေ့ ဒီဘ၀မှာပဲ
သားအိမ်ကင်ဆာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီဆိုးကျိုးတွေ အားလုံးဟာ ကိုယ်တိုင်က အခုဘ၀ ဒါမှမဟုတ် အတိတ်ဘ၀တုန်းက အကုသိုလ်လုပ်ခဲ့မိလို့ ရတဲ့ အကျိုးတရားတွေပါပဲ။
လောကဓမ္မတာတရားဟာ ဘုရားမို့ လို့ ဘုရင်မို့ လို့ရာထူးကြီး သိက္ခာရှိလို့ ဆိုပြီး မျက်နှာမလိုက်
တတ်ဘူး၊ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် အကုသိုလ် လုပ်ရင်တော့ လုပ်ခဲ့တဲ့ အကျိုးတိုင် ကိုယ်တိုင်ပြန်ခံရမှာပဲ။
(၃) နောက်ထပ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ကတော့အသက်၄၀ကျော်ပါပဲ။ သူမမှာ မောင်နှမ ငါးယောက် ၇ှိပါတယ်။
အစ်ကို သုံးယောက်နဲ့ အစ်မ တစ်ယောက် သူမက အငယ်ဆုံးသမီးပါ။
တယ်။သူမနဲ့ အစ်ကိုအကြီးဆုံးကလွဲရင် သူမမိခင် နဲ့ကျန်တဲ့မောင်နှမသုံးယောက်ကကိုယ်ဝန် ဖျက်ချ တာနဲ့ ပက်သက်ပြီး အကုသိုလ်အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ သူမအမေကိုယ်တိုင်ကအပျိုကတည်းက
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခဲ့ဖူးသလို အသက် ၆၀ ကျော်တဲ့အထိ သူငယ်ချင်းတွေ မိတ်ဆွေတွေ ကိုယ်ဝန်ဖျက် ချ မယ်ဆိုရင်လဲ လက်သည်အိမ် ကို ကိုယ်တိုင် လိုက်ပို့ တယ်။
ပထမဦးဆုံး ဒုတိယအစ်ကို က အမေ့ကို “သား ချစ်နဲ့လွန်ကျုးမိလို့မိန်းကလေးမှာကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီဘယ် လိုလုပ်ရမလဲ” လို့ မေးတော့ “မလိုချင်ရင် ဖျက်ချလိုက်ပေါ့” တဲ့။အစ်ကို ဖြစ်တဲ့သူကလဲ သူ့ ကောင်မ
လေးကို ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဖို့ အမေပြောတဲ့လက်သည်အိမ် သွားပို့ တယ်။နောက်တော့ လက်ထပ်ပြီးလို့ကိုယ်ဝန်ထပ်ရတော့ အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ မလိုချင်သေးဘူးလို့ အမေ့ကိုပြန်ပြာပြတော့...
“ဒါဆိုလဲ သွားဖျက် ပစ်လေတဲ့”။
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချတဲ့ကိစ္စကို ပေါ့ပေါ့ဆဆပဲ မိခင်ကိုယ်တိုင်က သဘောထားတယ်။သားသမီးကိုယ်တိုင် ဖျက်မယ်ဆိုတာတောင် မတားခဲ့ပါဘူး။ ဒုတိယအစ်ကိုဆော်ဒီအာရေဗီးယားမှာတာဝန်နဲ့ ပြောင်းသွား
တာ့ ဟိုမှာရှိတဲ့ တစ်ချို့ မိတ်ဆွေတွေတွေက သားသမီးမလိုချင်လို့ဖျက်ချချင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ပဲ ဟိုနိုင်ငံက ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချပေးတဲ့ အသိဆရာဝန် တွေဆီကို လိုက်ပို့ တယ်။
သုံးနှစ်လောက်နေပြီး ထိုင်းကို ပြန်လာတော့ ပိုက်ဆံလဲတော်တော်များများစုမိနေပြီမို့ကိုယ်ပိုင်စီးပွါး
ရေး တစ်ခုလုပ်ပြီး သားသမီးယူတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တော့မှအစ်ကိုရဲ့ ဇနီးကသားသမီးမရနိုင်တော့
ပါဘူး။ ၇ှာထားတဲ့ပိုက်ဆံတွေနဲ့ စီးပွါးရေးလုပ်တော့လဲ ၀က်ဝက်ကွဲအောင်ရှူံးခဲ့တယ်။ နောက်တော့ စီးပွါးရေးကလဲအဆင်မပြေ စိတ်ထောင်းကိုယ်ကျေပြီး ငယ်ငယ်ရွယ်၇ွယ်နဲ့ ဆုံးသွားခဲ့တယ်။ ဒုတ်ိယ အစ်ကိုပြီးတော့တတိယမြောက်အစ်မကိုယ်ဝန်ှရှိလာလို့မလိုချင်သေးဘူးဆိုပြီး အမေ့ကိုပြောပြတော့ “မလိုချင်သေးရင် သွားဖျက်လိုက်လေ သမီး အမေ လိုက်ပို့ ပေးမယ်” ဆိုပြီး မိခင်ကိုယ်တိုင်လိုက် ပို့ 
တော့ယောကျာ်းဖြစ်တဲ့သူက သူမနဲ့ သမီးလေးကို ပစ်ပြီးနောက်မိန်းမ ယူလိုက်ပါတယ်။
သူမမှာကလေးတာဝန်တစ်ဖက် အလုပ်က တစ်ဖက်နဲ့ မို့သမီးလေးကို ထိန်းမယ့်သူမရှိလို့ဆိုပြီးဆွေမျိုး
ထဲက သားသမီးလိုချင်တဲ့သူက မွေးစားဖို့ ခေါ်းထားလိုက်ပါတယ်။ သမီးရှိပေမယ့် သမီးနဲ့ တောင်အ
သက် ၅၀အရွယ်ထိအတူတူနေခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ သမီးလေးကလဲ သူမ ကိုသံယောဇဉ်မရှိဘူး။ဒါပေမယ့်
အခုချိန်ထိ သူမတစ်ယောက်ထဲအထီးကျန်စွာ အသက် င်ရက်တော့ ရှိနေသေးတယ်။
တတိယအစ်မပြီးတော့ စတုတ္ထ မြောက် အစ်ကိုကမိန်းမပွေပါတယ်။ သူကြိုက်ပြီဆိုရင် မယား၇ှိတာလဲ
မေ၇ှာင်ဘူး ရအောင်ယူတယ်။ယူပြီးလို့ ကိုယ်ဝန်ရလာခဲ့ရင် ပိုက်ဆံ ၃၀၀၀ ပေးပြီးသွားဖျက်ခိုင်း တယ်။
နောက်တော့ နောက်ထပ် ကောင်မလေးအသစ်လိုက်၇ှာတယ်။ ကိုယ်ဝန်ထပ်ရလာရင် ပိုက်ဆံ ၃၀၀၀
ပေးပြီး ထပ်ဖျက်ခိုင်းတယ်။မိန်းမအတည်တကျမယူပဲနဲ့အပျော်တွဲပြီး မိန်းကလေးတွေကိုလိုက်ဖျက်ဆီး
တာ တစ်နေ့ တော့ Accident တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဦးနှောက် ထဲ သွေးဝင်လို့ဆရာဝန်တွေက ဦးခေါင်းခွံခွဲပြီး ကုသနေတဲ့အချိန်မှာ အစာအိမ်ဟောင်းကကြွက်သားတွေ အလုပ်မလုပ်တော့လို့ ဆိုပြီး ဆရာဝန်တွေ
ကဗိုက်ကိုထပ်ခွဲပြီး ဒီအတိုင်း ဗိုက်ပွင့်ရက်သားနဲ့ICU အခန်းထဲမှာ ထား ရတယ်။ တစ်ပါတ်အကြာမှာ
ပြန်ချုပ်တော့ ချုပ်လို့ မပြီးခင်မှာဗိုက် ပွင့် ရက်သား သေသွားပါတယ်။ငွေ ၃၀၀၀ ပေးပြီး ဗိုက်ပြဿနာ
ရှင်း ခိုင်းတဲ့ အကုသိုလ်က ဒီဘ၀မှာပဲ ကိုယ်တိုင်ဗိုက်ဖောက်ခံရပြီး ငယ်ငယ်၇ွယ်၇ွယ်ပဲအသေဆိုးနဲ့
နောက်ဆုံးကတော့ အသက် ၆၀ ကျော်အမေရဲ့ အလှည့်ပါ။အသက် ၆၀ကျော်အချိန်ထိကိုယ်တိုင်က
ကိုယ်ဝန် ၂ ကြိမ် သုံးကြိမ်ဖျက်ချခဲ့ဘူးသလို ၀စီကံ ၊မနောကံ နဲ့ကိုယ်ဝန်ဖျက်တာကို အားပေးကူညီခဲ့ တဲ့အတွက် တစ်နေ့ တော့ ချော်လဲပြီး သူမ ခြေလက်တွေ လေဖြတ်သလို လှုပ်လို့ မရတော့ပါဘူး။ က
ယာင်ကတမ်းနဲ့ ပါးစပ်ကလဲ “ငါ့လည်ပင်းကို လာညှစ်နေကြတယ် ကယ်ကြပါဦး ကြောက်ပါပြီဆိုပြီး ” ညညဘက်ထအော်နေတယ်၊သေခါနီးမှာတောင် လည်ပင်းကိုတစ်ယောက်ယောက်က ညှစ်လို့ သေရ တဲ့အနေအထားနဲ့မချိမဆန့်မျက်လုံးပြူး လျှာထွက်ပြီးမှသေရရှာတယ်။ သူမမိသားစုမှာအစ်ကိုနှစ်
ယောက် နဲ့ အမေ က မချိမဆန့် ဝေဒနာခံစားပြီး စိတ်ဆင်းရဲစွာသေသွားပေမယ့် အစ်ကိုအကြီးဆုံး က
တော့ သေမယ့်မနက်မှာဘုန်းကြီးဆွမ်းလောင်း ပြီးတော့ အိပ်ရာထဲ ၀င်လှဲရင်းအေးအေးဆေးဆေး နဲ့
သေသွားတယ်။ဘ၀မှာ သူများကိုဒုက္ခမပေးခဲ့လို့ သေတော့လဲဒုက္ခကင်းကင်းနဲ့ သေရတယ်။
မြွေပွေးကို ငယ်တယ်ဆိုပြီးတော့ အထင်သေးပြီး ကိုင်မိရင် အဆိပ်သင့်ပြီးသေနိုင်သလို အကုသိုလ်ကို
လည်း ဒါလေးများဟု ယောင်မှားပြီး မပြုမိဖို့ သေချာသတိထားသင့်ပါတယ်။
(၄) နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေးပါ။ ချစ်သူနဲ့ လွန်ကျုးမိလို့ ကိုယ်ဝန်ရလာတော့ ထုံးစံအတိုင်းကောင်လေးက တို့ တွေကျောင်းမှမပြီးသေး
တာပဲ။ အလုပ်လဲမရှိသေးလို့ ယူလို့ မဖြစ်သေးဘူး။မိဘတွေသိရင်လည်း ဆူခံထိလိမ့်မယ်။သွားဖျက်ချ လိုက်ပါဆိုပြီးပြောတော့ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချပေးတဲ့နေရာကိုသူမတစ်ယောက်တည်း ကြောက်ကြောက် နဲ့
ရောက်သွားခဲ့တယ်။သူမကိုယ်ဝန်သွားဖျက်တဲ့အချိန်မှာ မိန်းမပွေတဲ့ ချစ်သူကတခြားမိန်းကလေး တစ်
ဟိုရောက်တော့ သူမလိုပဲ ငယ်ငယ်၇ွယ်၇ွယ်မိန်းကလေးတွေ တွေ့ ရပါတယ်။ အတွင်းခန်းထဲကလည်း မချိမဆန့် အော်သံတွေကြားရတော့ သူမတော်တော်ကြောက်သွားခဲ့တယ်။အိမ်ပဲထပြန်ရင်ကောင်းမ
လား ။အဖေနဲ့ အမေသိရင်လည်း ကျောင်းထုတ်ခံရဦးမယ်။ ချစ်သူကလဲငြိုငြင်ဦးမယ်။သူမမှာ ချွေးတွေတောင်ပျံနေပြီ။သူမအလှည့်လည်းရောက်တော့
“တစ်ကယ်ဖျက်ချမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီးလား” လို့ အမျိုးသမီးကြီးကမေးပါတယ်။
သူမကလည်း “ဟုတ်ကဲ့ ”လို့ ဖြေလိုက်တော့
“အခုချက်ချင်းဖျက်လို့ မရဘူး ဒီဆေးကိုအရင်သောက် မနက်ကျမှ ပြန်လာခဲ့ ”လို့ ပြောပြီးသူမကိုဆေး
အနီတစ်လုံးပေးပါတယ်။သူမလည်း ဆေးလုံးကို ယူပြီးအမျိုးသမီးအိမ်သာဘက်ထွက်လာခဲ့တော့အမျိုး သမီးကြီးတစ်ယောက်အိမ်သာဘေးက အမှိုက်ပုံး ထဲကို အထုတ်လေး တစ်ထုပ်လာပစ်ပြီး အမှိုက်ပုံးနဲ့ ကပ်ရပ်နံရံမှာ ပန်းခွေသေးသေးလေးတင်ပြီး ကန်တော့နေတာတွေ့ တော့ သူမစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ ဘာလဲလို့ သိချင်လာတော့ သူမသွားကြည့်တဲ့အခါမှာ နံရံပေါ်က ချိတ်မှာ ပန်းခွေသေးသေးလေးတွေ အများကြီးပဲ။ အမှိုက်ပုံးထဲမှာလည်း ပလပ်စတစ်အိတ်သေးသေးတွေထဲမှာ နီတာရဲ ကလေးပိစိကွေး
လေးတွေ သွေးတွေ အလိမ်းလိမ်းနဲ့ အများကြီးတွေ့တော့ သူမရင်ထဲတအားဆို့ သွားခဲ့တယ်။
ခုနတုန်းက အမျိုးသမီးလာပစ်ချသွားတာ ဖျက်ချထားတဲ့ ကလေးအလောင်းတွေပဲ။
သူမ အမျိုးသမီးကြီးပေးထားတဲ့ဆေးလုံးကိုလည်းလွှင့်ပစ်ပြီးဆက်မကြည့်တော့ပဲပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။ သူမချစ်သူဆီ ဖုန်းဆက်ပြီး
“ငါ့ကလေးကို ငါမဖျက်ချရက်ဘူး” လို့ ပြောတော့ ချစ်သူက ဒေါသသံနဲ့ 
“အဲ့ဒီကလေးကိုမွေးလို့ မဖြစ်ဘူးလို့ မင်းကိုပြောထားတယ်လေ”
ခဏစောင့် လို့ ပြောပြီးဖုန်းချသွားတော့ သူမ စိတ်ပျက်ပျက်နဲ့ မီးရထားလမ်းဘက်လျှောက်လာရင်း သံ လမ်းပေါ်လဲရောက်ရော သူမအားပြတ်ပြီး မေ့လဲသွားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ
“မေမေ ထထ အိမ်ပြန်ရအောင်နော် ထပါမေမေ” လို့ 
အသံကြားတော့ အားယူပြီးမျက်လုံးကြည့် တာ အသက် ၆နှစ်အရွယ် ချစ်စရာ ကလေးမလေးတစ်
တော်တော်ပဲပျက်နေတာမို့ ပြန်မေ့သွားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ လူလေးငါးယောက်ရောက်လာပြီး သူမ ကို ဆေးရုံပို့ ပေးလိုက်ကြပါတယ်။
သူမပြန်သတိရတော့ သူမဘေးနားမှာ မိဘနှစ်ပါးက စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်တွေနဲ့ စောင့်နေကြပါတယ်။
“လူ့ ဘ၀ ဆိုတာ အင်မတန်မှရခဲတယ်သမီးလေး။ ကလေးဖျက်ချတယ်ဆိုတာ ကလေး မွးတာထက်ကို အန္တရာယ်ပိုများတယ်။အသက်နဲ့ လဲ လောင်းကြေးထပ်ရတယ်။မေမေ့မှာ ဒီသမီးလေးတစ်ယောက်ပဲရှိ
တာသမီးသာတစ်ခုခုဖြစ်သွားရင်ဖေဖေမေမေတို့ရင်ကွဲမှာသမီးကြည့်ရက်တယ်ပေါ့။တာဝန်မယူတတ် တဲ့ဖခင်စိတ်မရှိတဲ့သူကိုသမီးမေ့လိုက်ပါ။မြေးလေးကို တော့ မွေးဖြစ်အောင်မွေးပါ။ မြေးလေးနဲ့ အတူ
မြင့်မြတ်တဲ့မိခင်ဘ၀ကိုခံယူပြီး ဖေဖေမေမေတို့ နဲ့ ဘ၀ကိုအသစ်ကပြန်စပါ။”
သူမ မေမေရဲ့ စကားလေးတွေဟာ အနာဂတ်ကို ရင်ဆိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံးခွန်အားတွေ ရလိုက်သလို ပဲ။ ပီးတော့ မမြင်ရသေးတဲ့ကလေးလေး ကိုလည်း မေမေက ပေးတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ ကြိုဆိုလိုက်တော့မယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ သူမကိုလိုက်ရှာနေတဲ့ သူမချစ်သူဟာ ရထားသံလမ်းပေါ် လဲဖြတ်
မောင်းရော သံလမ်းပေါ်ရောက်တာနဲ့ဆိုင်ကယ် စက်ရပ်သွားပါတယ်။ ရထားဥသြသံကလဲနီးလာပြီး ဘယ်လိုမှ စက်နှိုးလို့ မရတော့ဘူး။
ဆိုင်ကယ်ပေါ်က ဆင်းပြီး ပြေးမယ်ကြံတုန်း အရှိန်နဲ့ လာတဲ့ရထားတိုက်ထည့်လိုက်တာ လူတခြား ဆိုင် ကယ်တခြားလွင့်ပြီး ပွဲချင်းပြီးသေသွားတယ်။ မိန်းကလေးတွေကို ကျောရရုံကြံပြီင်္း ဖခင်စိတ်မ၇ှိတဲ့ လူ စ်ိတ်မရှိတဲ့သူ ခုတော့ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဇာတ်သိမ်းသွားခဲ့တယ်။
အခုချိန်မှာ သူမကကိုယ်တိုင်ဘွဲ့ ရလို့ အလုပ်ဝင်နေပါပြီ။သူမသမီးလေးတောင် ၅နှစ်ကျော် ခြောက်နှစ် အ၇ွယ်၇ှိနေပြီ။
“မေမေထထ အိမ်ပြန်ရအောင်နော် မေမေ”
လို့နှိုးပီးပြောတဲ့ သမီးလေးနဲ့ အခု သမီးလေးနဲ့ ရုပ်လေးက တစ်ထပ်တည်းပဲ။ သူမအပေါ်လဲ အလိုက်သိ
ဒါပေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်၇ဲ့ မေးငေါ့မှုတွေ တော့ ခံခဲ့ရတာပေါ့။
ဒီပို့ လေးထဲက အကြောင်းအရာတွေဖတ်ပြီး ညီမလေးတို့ ဘယ်လိုသင်ခန်းစာရလိုက်ပါသလဲ။
တစ်ကယ့်အဖြစ်အပျက်နော်။ကာယကံ၇ှင်ကိုယ်တိုင်က သူတို့ လို မမှားရအောင် သင်ခန်းစာပေး ချင်
လို့တစ်နိုင်ငံလုံးသိအောင်ရင်ဖွင့်ပြထားတာ။
မြန်မာအမျိုးသမီးလေးတွေအတွက် မှတ်သားစရာ ထိုင်းစကားပုံတစ်ခုရှိတယ်..
“သမီးမိန်းကလေးမွေးထားတဲ့အိမ်ဟာ အိမ်ရှေ့ မှာ အိမ်သာဆောက်ထားသလိုပါပဲ” တဲ့။
ကိုယ့်အိမ်က အိမ်သာကို အမြဲသန့် ရှင်းအောင် တိုက်ပေးထားမှ ကိုယ့်အိမ်အပုတ်နံ့ ကင်းသလို ။သမီး မိန်းကလေးမွေးထားရင်လဲအပြစ်ကင်းအောင်နေနိုင်မှကိုယ့်အိမ် သူတပါးရဲ့ကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်ခြင်းကင်းပါ
လိမ့်မယ်။လူမှန်ရင် အမှားမကင်းဘူးဆိုပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် နှစ်မယ့် အမှားတော့ကင်းသင့်တယ်။ လူတိုင်းဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အချစ်ဆုံးပါပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တစ်ကယ်ချစ်ရင် ကိုယ့်ဘ၀ ကို လေး
လေး နက်နက် တွေးသင့်တယ်။ကိုယ့်ဘ၀တန်ဖိုးရှိအောင်နေသင့်တယ်။လူသေရင်ခန္ဓာကိုယ်ပုတ်သွား
ပေမယ့် ကိုယ့်မိသားစု ပတ်ဝန်းကျင် သူငယ်ချင်း အသိုင်းအ၀ိုင်းကြားမှာ နာမည်ကတော့ကျန်နေလိမ့်
မယ် အဲ့ဒီကျန်ခဲ့တဲ့ ကိုယ့်နာမည် မပုတ် အောင် နေသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ “ဘ၀ကို များများတွေး ဝေးဝေးကြည့်” ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်
ပါ။ များများတွေးဆိုတာကကိုယ်လျှောက်တော့မယ့်လမ်း (ချစ်ခ၇ီးလမ်း ဒါမှမဟုတ် ဘ၀လမ်း )တစ်ခုခု
နဲ့ပက်သက်လို့ သင့်မသင့်မှန်မမှန် ကောင်းမကောင်း သေချာစဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်အောင်ကြိုးစားပါ။
တွေးပြီးရင် အဆုံးထိမြင်အောင်လှမ်းကြည့်ပါ။.တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်လျှောက်လိုက်တဲ့လမ်း၇ဲ့ အဆုံး
သတ်မှာ ထင်ထားသလို မဟုတ်ပဲ အမှားတွေဖြစ်နေရင် နောက်ပြန်လှည့်ဖို့ ခက်ပါတယ်။ အများဆုံးတွေ့ နေရတာကတော့ ချစ်သူကို ယုံကြည်မိလို့ ဘ၀တစ်ခုလုံးပုံပေးပြီးမှ ချစ်သူကတာဝန်မ
ယူလို့အဆိပ်သောက်သေတာ ။ ချစ်သူကိုအားကိုမိလို့ ငယ်ငယ်၇ွယ်၇ွယ်နဲ့ အိမ်ထောင်ပြုပြီးမှ ဇနီးနဲ့ သားသမီးထက် အပြင်မှာ သာယာမှု၇ှာတဲ့ လင်ဆိုးမယား ဘ၀ရောက်နေကြတာ။ငယ်ငယ်၇ွယ်ရွယ်နဲ့ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချတာ ဒီခေတ်မှာ တော်တော်များလာတယ်။လူဆိုတာ တိရိစ္ဆာန်တွေထက် အသိတရား နဲ့ ညဏ်ပညာပို၇ှိပါတယ်။
အ၇ှက်တရားလဲ သိတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကျင့်တရားလဲစောင့်ထိန်းတတ်ပါတယ်။
“ခွေးလေးတွေ ၊ကြောင်လေးတွေတောင် ကာမဂုဏ်ခံစားပြီး သဘာဝအရ ရလာတဲ့သားသမီးလေး
တွေကို မငြီးမငြူပဲကာကွယ်စောင့်ရှောက် ကြပါတယ်၊ခွေးတွေ၊ကြောင်တွေထက် အသိညဏ်ရင့်ကျက်
တဲ့ လူသားအချို့ ဟာ ကာမဂုဏ်ခံစားပြီး သားသမီးမလိုချင် လို့အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုး နဲ့ ကလေး ဖျက်ချပစ်တာဟာတိရိစ္ဆာန်တွေလောက်တောင် အသိစိတ်မရှိလို့ကိုယ်ချင်းစာစိတ် မရှိလို့ တဲ့၊ ငါးပါး
သီလ ထဲက သူတစ်ပါးအသက်သတ်ဖြတ်မှုထဲမှာလူ၏အသက်ကိုသက်ဖြတ်မှုဟာအပြစ်ပိုကြီးပါတယ်၊
လူထဲမှာတောင်မှ သီလ၊ သမာဓိ၊ သိက္ခာနဲ့့ပြည့်စုံတဲ့သူကိုသတ်ရင် ပိုပြီးအပြစ်ကြီးပါတယ်၊၊ပဋိသန္ဓေ
နေတဲ့ကလေးတွေဆိုတာ အကုသိုလ်ပြုလုပ်ရမှန်းမသိသေးလို့သူတို့လးတွေဟာငါးပါးသီလ လုံကြပါ
တယ်။ အဲ့ဒီကလေးလေးတွေသတ်ရင်လဲ ငရဲသေချာပေါက်ကျတာပဲ။
အတိတ်ဘ၀ကကိုယ်ဝန်ခဏခဏဖျက်ချခဲ့ဘူးရင်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချတာကိုအားပေးကူညီခဲ့ရင် ဒီဘ၀မှာ သားသမီးအရမ်းလိုချင်ပေမယ့် မရနိုင်တဲ့ အမြုံမ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ချမ်းချမ်းတို့ မိန်းကလေးတော်တော်များများက ကိုယ့်သူငယ်ချင်း ကိုယ်ဝန်၇ှိလာရင် ဆေးလိုက်ဝယ်
ပေးတာ လက်သည်အိမ် အဖော်လိုက်ပို့ ပေးတာတွေကို သူငယ်ချင်းကောင်းပီသစွာနဲ့ အားပေး ကူညီ တတ်ကြပါတယ်။ကိုယ့်သူငယ်ချင်းအကြောင်း ပတ်ဝန်ကျင်ကသိရင် ကဲ့ရဲ့ ကြမှာကိုး..
ကံ ကံ ရဲ့ အကျိုး နဲ့ ပက်သက်ပြီိး ယုံကြည်ချက်တစ်ခု ပြောပြမယ်နော်..
ငါကောင်းရင်ပြီးရော သူများဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် ဆိုပြီးသူ့ ထိုက်နဲ့ သူ့ကံလို့ သဘောထားရင် ဒီဘ၀မှာရော
ဖြစ်လေရာဘ၀မှာ ကိုယ် ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါကူညီမယ့်သူ မရှိဘူး။ အသက်ဘေးကြုံရင်တောင်လာ
ကယ်မယ့်သူ မရှိဘူး။ဘာလို့ လဲဆိုတော့ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ထားလို့ ။
သူတစ်ပါး ဒုက္ခမရောက်အောင် အကုသိုလ်မဖြစ်အောင် စေတနာနဲ့ တားရင်ဖြစ်လေရာဘ၀မှာ အသိ ညဏ်၇ှိတဲ့သူ ကိုယ်တိုင်က အမှားကျုးလွန် ချင်တာတောင် ကိုယ့်ကို ဆုံးမမယ့်သူ လမ်းပြမယ့်သူတွေ့
ပြီး အမှားကိုရှောင်နိုင်တဲ့အကျိုးရပါတယ်။အသက်ဘေးကြုံလာရင်လဲကယ်မ မယ့်သူ တွေ့ ပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်က ကိုယ်ဝန်မဖျက်ချရင်တောင် သူများဖျက်တာကို အားပေးကူညီရင်လည်းဝစီကံ၊မနောကံ
ဖြစ်လေရာဘ၀မှာ ကိုယ်အသက်အန္တရာယ် ကြုံတဲ့အခါကယ်မမယ့်သူ မတွေ့ဘူးတဲ့ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူများအသက်သတ်တုန်းက အားပေးကူညီထားလို့ ပါပဲ။
အဲ့ဒီလိုကူညီပေးရင် ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး သူများခေါင်းပေါ်က ငရဲပန်းကိုယ့်ခေါင်းပေါ်ပန်လိုက်တာ နဲ့ အတူတူပဲ။ ကိုယ်လဲငရဲကြီးတာပဲ။
ကိုယ့်သူငယ်ချင်းကိုလည်း ကူညီချင်တယ် ငရဲလဲမကျချင်ဘူးဆိုရင် ကိုယ့်သူငယ်ချင်းမှာ ချစ်သူရှိတဲ့
အခါ ချစ်သူဘ၀မှာ အယုံမလွယ်ဖို့ အညှာမလွယ်ဖို့အပျိုဘ၀ကို တန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ အမြဲသတိပေးပါ။
ပတ်ဝန်းကျင်က အမှားတွေ ကိုသင်ခန်းစာယူပါ။ ချစ်သူမထားခင် အိမ်ထောင်မပြုခင်မှာ ကိုယ့်ချစ်သူ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဘက်ဟာ ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာ သေချာစုံစမ်းပါ။ ကိုယ့်ကို တစ်ကယ်မြတ်နိုးပြီး တန်ဖိုးထားတတ်သူ ဟုတ်မဟုတ် သေချာ လေ့လာပါ။
ချမ်းချမ်းတို့ မိန်းကလေးတွေအတွက်တော့ ကိုယ်ချစ်မိတဲ့ကိုယ့်ချစ်သူဟာ ကိုယ့်ရဲ့အားကိုးရာသူရဲ
ကောင်း ပါပဲ..ဒါပေမယ့် ကိုယ်ထင်ထားတဲ့သူရဲကောင်းဟာတစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်အရှက်နဲ့ဘ၀ကို
သတ်မယ့် ရက်စက်တဲ့သူ ဖြစ်ချစ်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ လူ့ စိတ်ဆိုတာ မြင်ရတာမှ မဟုတ်တာကိုး။
ဒါ့ကြောင့် ချစ်သူ သူရဲကောင်းကိုယုံပြီး ဘ၀ကို လွယ်လွယ်နဲ့ပုံမပေးပါနဲ့ ။ ကိုယ့်ချစ်သူကိုလဲလေးစား
ပါ။ ကိုယ့်ဘ၀ကိုလည်း ကိုယ်တန်ဖိုးထားပါ။
တစ်နေ့မိခင်ဘ၀ရောက်ခဲ့ရင်တောင် သိက္ခာရှိတဲ့ မိခင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေ။ အနေမတတ် အထိုင် မတတ်လို့ ဗိုက်တစ်လုံးနဲ့ ကျန်ခဲ့ ပြီးမှဖျက်ချရင်လည်း ငရဲကျမှာစိုး လို့မွေးပြီးမှ အမေဖြစ်ရင်မိဘဆွေ
မျိုးမောင်နှမနဲ့ ကိုယ့်သားသမီး ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မျက်နှာငယ်ရပါတယ်။
အမေဘ၀ရောက်တာချင်းတူတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်က လေးစားတဲ့ အမေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က မေးငေါ့ တဲ့ အမေ။ညီမလေးတို့ ဘယ်လိုအမေ မျိုးဖြစ်ချင်ပါသလဲ။
ပုခက်လွှဲတဲ့ မိခင်ရဲ့ လက်ဟာ ကမ္ဘာကြီးတောင် လွှမ်းမိုးနိုင်တယ်တဲ့..အားလုံးလှပတဲ့ လက်ပိုင် ၇ှင်များ
(၁)ပညာညဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတစ်ပါးရဲ့ အမှားကို ကြည့်ပြီးကိုယ်တိုင်ကမမှားအောင်သင်ခန်း စာယူတတ် သံဝေဂယူတတ်တယ်။သူတို့ လိုမမှားအောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆင်ခြင်တယ်။
(၂) ပညာညဏ်နည်း တဲ့သူတွေကတော့ သူတစ်ပါးရဲ့ အမှားကို ကြည့်ပြီး သင်ခန်းစာမယူတတ် ဘူး။ ကိုယ်တိုင်က အမှားကျုးလွန်တော့မှ မှားမှန်းသိပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆင်ခြင်နိုင်တယ်တဲ့။
(၃)ပညာညဏ် လုံးလုံးမရှိတဲ့သူတွေဟာ ကိုယ်တိုင်က မှားနေတာတောင် သင်ခန်းစာမ ယူတတ်ဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကောင်းအောင်မနေတတ်ဘူး မပြုပြင်တတ်ဘူးတဲ့။
ညီမလေးများ အားလုံးဒီပိုစ့်လေးကိုဖတ်ပြီးသင်ခန်းစာယူနိုင်ရင်တော့ ချမ်းချမ်းရေးရကျိုးနပ်ပါပြီ။
မိန်းမသားချင်း ကိုယ်ချင်းစာလို့ရင်ထဲရှိတာလေး သိတာလေး တွေမျှဝေပေးတာပါ။
အရေးအသား ရိုင်းသွားခဲ့ရင် အမှားများပါသွားခဲ့ရင် နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးပါ။
Written.....By.... ချမ်းချမ်း(ရွာသူလေး) http://www.haymonchan.blogspot.com
သင့်ရဲ့ ကိုယ်ချင်းစာနာ တတ်နဲ့ မေတ္တာနဲ့ အပြစ်မဲ့တဲ့ ကလေးလေးတွေကို လူ့ လောကထဲကို ရဲဝံ့စွာ
အများအတွက်အကျိုးရှိနိုင်မည်ဟုယူဆပါသဖြင့်Chocolate မြို့တော် ဘလော့ဂ် မှကူးယူဖေါ်ပြပါသည်။
Posted by သဇင်ရနံ့at 00:01
လွတ်လပ်မှုကိုငတ်မွတ်နေတဲ့ လောကကြီးအတွက်လွတ်လပ်တဲ့အတွေးအခေါ်အယူအဆတွေ၊အသိအမြင်ခံစားချက်တွေကို ဖေါ်ပြဖို့ ဒီ ဘလော့ဂ်ကိုဖန်တီးပါတယ်။ဒါကြောင့် ဒီဘလော့ဂ်ကိုလာရောက်လည်ပတ် သူအားလုံး လွတ်လပ်စွာအကြံပြုရေးသားပေါက်ကွဲနိုင်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့လက ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ယောက် ကိုယ်ဝန်သွားဖျက်တာ ကလေးက မကျလို့ တဲ့ ထိုင်းလက်သည်အိမ်ကနေပြန်လာပြီး မဲဆော...
အမျိုးသမီးများ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ဆန္ဒ ဖြေဖျောက်တဲ့ အကျင့် (အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ)
ကျန်းမာရေး အမြင်နဲ့ပဲ ကြည့်ကြပါနော်… ဆရာရှင့် ကျမ အခု ရောဂါတခု ခံစားနေရလို့ စိတ်ပူလို့ ဆရာ့ကို မေးတာပါ ရင်ဖွင့်တာ ပါရှင့်...
ပြည့်ဖြိုး တင်းရင်းတဲ့ ရင်သားအလှကို ပိုင်ဆိုင်လိုတာ မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့ ဆန္ဒဖြစ်ပါ လိမ့်မယ်။ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ အလှတရားကို...
Jarle Tverli ဟာနော်ဝေနိုင်ငံ Samnanger မြို့ ကဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ဂျူလိုင်လကကု လ သမဂ္ဂရဲ့ လူသားချင်းဆိုင်ရာ အကူအညီအစီအစဉ်နှင့်အတူမြန်မာပြည...
လွယ်ကူလေ့လာ ကလေးများအတွက် ပရိုဂရမ်းမင်းပညာ
Category: နည်းပညာ Published on Saturday, 22 December 2012 09:05 Written by နွေဦး ပရိုဂရမ်းမင်း (Programming) လ...
ရခိုင်အနုပညာရှင် သရုပ်ဆောင် မင်းသွေး၏ အလှူ
ပျိုမေတို့ အတွက် ငှက်ပျောသီး
ပျိုမေတို့ လက်ရှိ သုံးနေတဲ့ အလှကုန်တွေ အများစု ငှက်ပျောသီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ အလှကုန်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ငှက်ပျောသီးဟာ အသားအရေ ...
(အစ္စရေးလူမျိုး) မိတ်ဆွေတစ်ဦး ပို့ပေးလိုက်တဲ့ Isreal - Facts of History အကြောင်းကို ဖတ်ကြည့်နေပါ တယ်။၁၅မိနစ်လောက်ပဲ ကြာမယ်ဆိုပေမဲ့...
အခါတပါးမှာ မြတ်စွာဘုရားသည် ရဟန်း
တို့အား တရားနာကြားခြင်း၏အကျိုး ၅ပါး
၅။စိတ်ကြည်လင်ခြင်းဟူသော အကျိုး ၅-
ပါးကို ရစေ၏ဟု ဟောတော်မူသည်။
Saradaw U Thumingala(Deou)
ELEVEN MEDIA GROUP(ENGLISH)
ဘောလုံးပွဲ များတိုက်ရိုက် ကြည့်ရန်
တစ်ခုလုံး သက်ရှိလောက တစ်ခုလုံးအတွက်
စတဲ့ စာတွေအားလုံးကိုမည်သူမဆိုပေးပို့ နိုင်
ပါတယ်။ လူမျိုး ဘာသာ မရွေး၊ လူတန်းစား
တ၀ဂူမှ စီးဆင်းသော နှလုံးသွေးစက်
Really Useful English Idioms 9
မြတ်ဗုဒ္ဓအလိုကျ အောင်မြင်ကြီးပွားကြောင်း သြ၀ါဒရတနာမ...
Really Useful English Idioms 8
မြတ်ဗုဒ္ဓအလိုကျ အောင်မြင်ကြီးပွားကြောင်း သြ၀ါဒရတနာမ...
မြတ်ဗုဒ္ဓအလိုကျ အောင်မြင်ကြီးပွားကြောင်း သြ၀ါဒ ရတနာ...
Really Useful English Idioms-7
Really Usefull English Idioms 6
Really Usefull English Idiom 5
ရခိုင်ရို့ ၏အတိတ်၊ပစ္စုပ္ပန် နှင့်အနာဂတ်(၁)
What Is Buddhism?(1)
What Is Buddhism?(2)
What Is Buddhism?(3)
What Is Buddhism?(4)
What Is Buddhism?(5)
What is Buddhism? (6)
What is Buddhism?(7)
What is Buddhism?8
Really Useful English Idioms4
Thazinranant.com and. Watermark theme. Powered by Blogger.